Iimfundiso zeBhayibhile Zeentsuku Zezabasebenzi Ukukukhuthaza
Ukukhuthazwa NgemiBhalo Ephakamisa Ngomsebenzi
Ukuvuyela umsebenzi ovuyisa ngokwenene kuyintsikelelo. Kodwa kubantu abaninzi, umsebenzi wabo ngumthombo wokugqithisa okukhulu nokudangala. Xa iimeko zethu zengqesho zingekho kakuhle, kulula ukulibala ukuba uThixo ubona imizamo yethu eqinileyo nezithembiso zokuvuza umvuzo wethu.
Iivesi zeBhayibhile eziphakanyisiweyo zemihla ngemiSebenzi yosuku lomsebenzi zenzelwe ukukukhuthaza emsebenzini wakho ngelixa ugubha iveki yeeholide.
Iimfundiso zeBhayibhile ezili-12 zokugubha iMini yemiSebenzi
UMosis wayengumalusi, uDavide wayengumalusi, uLuka ugqirha, uPawulos umenzi weentente, uLidiya umrhwebi, kunye noYesu ngumbazi.
Abantu baye basebenza nzima kuyo yonke imbali. Simele senze ubomi xa senza ubomi bethu kunye neentsapho zethu. UThixo ufuna sisebenze . Enyanisweni, uyayilawula, kodwa kufuneka sithathe ixesha lokuhlonela iNkosi, ukuhlakulela intsapho yethu, nokuphumla emsebenzini wethu:
Khumbula usuku lweSabatha , ukuligcina lingcwele. Uze usebenze iintsuku ezintandathu, wenze yonke imisebenzi yakho, kodwa usuku lwesixhenxe luyisabatha kuYehova uThixo wakho. Uze ungenzi msebenzi, wena, nonyana wakho, okanye intombi yakho, umkhonzi wakho, okanye umkhonzazana wakho, nemfuyo yakho, nokuba ngumphambukeli osemasangweni akho. (Eksodus 20: 8-10, ESV )
Xa sinikela ngobubele , ngokuvuya, kwaye ngokukhawuleza, iNkosi ithembisa ukuba iyasikelela kuyo yonke imisebenzi yethu nento esenzayo:
Banike ngobubele kubo kwaye wenze njalo ngaphandle kwenhliziyo ecinezelayo; Ngenxa yoko uYehova uThixo wakho uya kukusikelela kuyo yonke imisebenzi yakho nakuyo yonke into obeka kuyo isandla sakho. (Duteronomi 15:10, NIV )
Umsebenzi onzima udlalwa ngokukhawuleza. Sifanele simbulele, sivuyiswe, ngenxa yokusebenza kwethu, kuba uThixo usikelela esibusweni salo msebenzi ukuze sinike izidingo zethu:
Uya kuyonwabela isiqhamo somsebenzi wakho. Uya kuba novuyo kwaye uphumelele kangakanani! (INdumiso 128: 2, iNLT )
Akukho nto inomvuzo ngaphezu kokunandipha oko uThixo asiphayo.
Umsebenzi wethu uyisipho esivela kuThixo kwaye sifanele sijonge iindlela zokufumana injabulo kuyo:
Ngoko ndabona ukuba akukho nto ilungileyo kubantu kunokuba novuyo emsebenzini wabo. Leyo yinkalo yethu ebomini. Kwaye akukho mntu unokusibuyisela ukuba sibone oko kwenzekayo emva kokufa. ( INtshumayeli 3:22, NLT)
Le ndinyana ikhuthaza abazalwana ukuba babe nemigudu engakumbi ekuhlanganiseni ukutya kokomoya, okunokubaluleka okungapheliyo kunomsebenzi esiwenzayo:
Musa ukusebenza ngokutya okuphangaleleyo, kodwa ekudleni okunyamezela ubomi obungunaphakade, oya kukunika uNyana woMntu. Kuba kuye uYise uYise ubeke uphawu lwakhe lokuvunywa. (Yohane 6:27, NIV)
Isimo sethu sengqondo kumsebenzi umcimbi kuThixo. Nangona umphathi wakho akafanelekanga, sebenze ngathi uThixo ungumphathi wakho. Nangona osebenza nabo bekunzima ukujamelana nabo , yenza konke okusemandleni ukuba ube ngumzekelo kubo njengoko usebenzayo:
... kwaye sisebenza, sisebenza ngezandla zethu. Xa sihlambalaza, siyasikelela; xa sitshutshiswa, sikhuthazela; (1 Korinte 4:12, ESV)
Sebenza ngokuzithandela nantoni na enikwenzayo, njengokungathi nisebenza eNkosini kunabantu. (Kolose 3:23, LT)
UThixo akabi; Akayi kukulibala umsebenzi wakho kunye nothando ombonise lona njengoko uncedise abantu bakhe kwaye uqhubeka uwanceda. (Hebhere 6:10, NIV)
Umsebenzi unenzuzo esingaziqondi. Kukulungele. Isinika indlela yokunyamekela iintsapho zethu kunye neemfuno zethu. Ivumela ukuba sibe negalelo kuluntu nakwabanye abanesidingo. Ukusebenza kwethu kwenza ukuba sikwazi ukuxhasa ibandla kunye nolawulo lobukumkani . Kwaye kusenza sikhuphe ingxaki.
Maye isela lingabe liba, kodwa kunoko makasebenze, enze umsebenzi onyanisekileyo ngezandla zakhe, ukuze abe nento enokwabelana ngayo nabani na abaneemfuno. (Efese 4:28, ESV)
... kwaye wenze isifiso sakho sokukholisa ubomi obumbileyo: Ufanele uqikelele ishishini lakho kwaye usebenze ngezandla zakho, njengoko sitsho kuwe, (1 Thesalonika 4:11, NIV)
Kuba nangona xa sasinawe, sikunike lo myalelo: "Lowo ongathandi ukusebenza akayi kudla." (2 Tesalonika 3:10, NIV)
Yingakho sisebenza kwaye sizama ngenxa yokuba sibeke ithemba lethu kuThixo ophilayo, onguMsindisi wabo bonke abantu, ngakumbi abo bakholwayo. (1 Timoti 4:10, NIV)
Inkcazelo yeDative Bond Definition (Coordinate Bond)